ISKUDAY Qaybtii 5aad - Cakaara News
ISKUDAY Qaybtii 5aad
Jigjiga( cakaaranews ) Arbaco 23ka March 2016, Fadlan adigoo kaashanaya, korodhsanayana aqoonta aad u leedahay guud ahaan dalkeena itoobiya gaar ahaana deegaankeena ISKUDAY inaad kajawaabto su’aalahan hoos kuqoran. Kadibna kuguulayso abaal marin.
Hadaba, wakhtiga loo cayimay kajawaabida su’aalahan waa 3maalmood oo ka bilaabanaysa caawa oo Ay taariikhdu tahay 23ka March. Kuna eg 26ka March 2016 Waxaadna kadib cidii kuguulaysatay iyo jawaabihiiba aad kalasocotaan www.cakaaranews.com habeenka Arbacada ah ee 30ka March 2016.
Qofka kajawaaba dhamaan su’aalaha.
Cidii kajawaabta wakhtiga lacayimay kahor ayaa mudnaanta leh
1. Imisa boodhan (dugsiyada-agoonta) ayaa deegaanka ku yaala,xagayse ku kala yaalaan?
2. Sheeg taariikhdii iyo maalinkii la ansixiyay 25ka degmo, 2da MM iyo 2da Gobol?
3. Sheeg Gobalkii ku guulaystay ciyaarta kubada laliska tartankii ugu danbeeyay ee 9ka Gobol iyo 4ta MM ?
4. Sheeg magaca nabi-ibraahim (CS) aabihii iyo waliba magacii saxda ahaa ee Nabi-Nuux ?
5. Waxaad sheegtaa nabigii uu nabiyulaahi muuse adhiga u raaci jiray iyo waliba inta sano ee uu uraacayay?
6. Sheeg deeganada dalka ee uu maro wabiga Abaay iyo waliba awooda enerji/quwada-koronto ee uu soo saaridoono marka uu shaqada bilaabo?